Nayakhabar.com: पाँच हजार लिएर १२ वर्षकी छोरीको बिहे !
पाँच हजार लिएर १२ वर्षकी छोरीको बिहे !
इटहरी । रामनगर भुटाहा गाविस ५ का खलखल मरिकले बेहुला पक्षबाट पाँच हजार रुपैयाँ लिएर आफ्नी १२ वर्षीया नाबालिका छोरीको विवाह गरिदिएका छन् । सुनसरीका दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका अधिकांश गाविसमा बालबालिकाको विवाह गर्ने क्रम नरोकिएको समाचार संकलनका क्रममा गएका सञ्चारकर्मीसमक्ष खलखलले गरिबीका कारण आफू नाबालिका छोरीको विवाह गर्न बाध्य भएको बताए ।
उनले छोरी प्रमिलाको विवाह गर्दा सप्तरी घर भएका ज्वाइँ प्रभु मरिकले पाँच हजार दिन राजी भएपछि छोरीको विवाह गरिदिएको सुनाए । १२ वर्षमा विवाह गरेकी खलखल मरिककी छोरी प्रमिला हाल १७ वर्ष पुगेकी छन् ।
१२ वर्षमा बालविवाहको सिकार बनेकी प्रमिला दुई सन्तानकी आमा भइसकेकी छन् । उमेर नपुगी गर्भ बसेपछि प्रमिलाको पहिलो सन्तानको निधन भयो । उनले वर्ष दिनपछि अर्को सन्तान छोरा जन्माएकी थिइन् । पहिलो सन्तान खेर गएको एक वर्ष नपुग्दै जन्मिएको प्रमिलाको दोस्रो सन्तानको पनि स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छैन ।
छोरो जन्माएपछि उनको घरपरिवारमा खुसीयाली छाए पनि प्रमिलाको जीवन भने कहाली लाग्दो छ । १६ वर्षको कलिलो उमेरमा दुई पटक गर्भवती बनेपछि आफू शारीरिक रूपमा कमजोर बनेको प्रमिलाले बताइन् ।
सुनसरी मध्यहर्साही गाविसकी १७ वर्षकी पिन्की मरिक पनि यतिबेला दुई सन्तानकी आमा बनकी छन् । १३ वर्षकै उमेरमा विवाह गरेकी पिन्कीको जेठो छोरो चार वर्षको र कान्छो सन्तानका रूपमा जन्मिएकी छोरी दुई वर्षकी भइन् । आफूले सानै छु भनेर विवाह गर्न नमान्दासमेत जबरजस्ती विवाह गरिदिएका कारण काम गरेर खान शारीरिक रूपमा कमजोर भएको उनको गुनासो छ ।
त्यस्तै सुनसरी घुस्की गाविसकी १७ वर्षीया फूलदेवी मरिकको १४ वर्षको उमेरमै रामनगर भुटाहाका रमेश मरिकसँग विवाह भयो । उनी १५ वर्षमा गर्भवती भएर एउटी छोरीकी आमा बनेकी छन् । १५ वर्षमै गर्भवती हुन बाध्य भएपछि उनले पनि शारीरिक रूपमा कमजोर बनेको दुखेसो पोखिन् ।
कम्मर दुख्ने र पाठेघर दुख्ने व्यथाले च्यापिरहेको उनको गुनासो छ । बालविवाह गर्नु सामाजिक अपराध भए पनि गाउँघरमा छोरी अर्कैसँग भाग्छे भनेर आमाबुबाले सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएर उमेरनै नपुगी विवाह गरिदिने गरेको फूलदेवीको भनाइ छ । बालविवाह गरेकै कारण रानगर भुटाहाको मरिक टोलमा ४५ वर्ष कटेका महिलानै भेटिँदैनन् ।
बालविवाहका कारण छिट्टै गर्भवती हुने भएका कारण मरिक टोलका १७ जना महिलाको अल्पायुमा नै मृत्यु भएको स्थानीय चलितर मरिकले बताए । स्थानीय तारादेवी मरिकले छोरी मान्छेले आफूखुसी विवाह गर्दा आमा बाबुको गाउँभरि कुरा काट्ने त्रासका कारण अधिकांश अभिभावकले छोरीका उमेरनै नपुगी विवाह गर्ने प्रचलन रहेको बताइन् ।